भारतमा रेल दुर्घटना सय बढीको मृत्यु, कति नेपाली परे ? - inaruwaonline.com
भारतमा रेल दुर्घटना सय बढीको मृत्यु, कति नेपाली परे ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर ०५, २०७३ समय: १०:३९:२२
५ मंसिर, काठमाडौँ । भारतीय उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेशमा आइतबार भएको रेल दुर्घटनामा कम्तीमा एक सय जनाको ज्यान गएको छ । यस दुर्घटनामा अन्य १५० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
प्रारम्भिक समाचारमा यस घटनामा ६३ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिइएको थियो । तर गम्भीर घाइते व्यक्तिको मृत्यु भएपछि दुर्भाग्यबस मृतकको सङ्ख्या एक सय पुगेको वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी दलजित सिंह चौथरीले बताए ।
उत्तर प्रदेशको कानपुर सरहसँग पुख्रायान क्षेत्रनजिकै स्थानीय समयानुसार आइतबार बिहान ३:३० इन्डोर पटना एक्सप्रेस नामक सा रेल दुर्घटना भएको थियो । सो रेलका करिब १४ वटा डिब्बा पटरीबाट छुट्टिएर दुर्घटना भएको छ । रेल दुर्घटना भएको सो अवस्थामा अधिकांश यात्रुहरु निदाईरहेका थिए ।
दुर्घटनामा परी घाइते भएकाहरुको स्थानीय अस्पतालहरुमा उपचार भईरहेको र धेरैको अवस्था गम्भिर रहेको हुनाले मृतकको सङख्या बढ्नेसमेत प्रहरीको अनुमान रहेको छ । घटनास्थलमा उद्धारकर्मीहरुले दुर्घटनाग्रस्त रेलमा अड्कीएकाहरुको शव निकाल्ने र रेललाई पनि हटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । उद्धारकार्य जारी नै रहेको बताइएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मृतक प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै रेल मन्त्री सुरेश प्रभुलाई घटनाका बारेमा नजिकबाट नियाल्न आग्रह गरेका छन् । भारतीय रेलवे अधिकारी विजय कुमारले रेल दुर्घटनाको कारण अहिलेसम्म प्रष्ट नभएको दिल्लीमा सञ्चारकर्मीहरुलाई बताए । उनले घटनाका बारेमा अनुसन्धान गर्ने तयारी भईरहेको पनि बताए ।सन् २०१४ मा उत्तर प्रदेशमा भएको २६ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । गत बर्ष पनि मध्य प्रदेशमा दुई वटा रेल एक आपसमो ठोक्किँदा भएको दुर्घटनामा कम्ती २७ व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो ।